Spiritum ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > Spiritum ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဝိညာဉ်တော်သည်, သင့်စစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလက်ခံထဲမှာ၏ပင်ကိုပါရမီအကြားအမြင်လမ်းညွှန်မှုရှာသငျသညျလှုံ့ဆျောပေးသည့်အခါ Spiritum သငျသညျကိုလမ်းပြဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဘိဥာဏ်ကွန်ယက်ကိုခိုင်မြဲစွာသငျသညျ (သင့်မိခင်ဘာသာစကားအတွက်) နိုင်ငံတကာကလေးစားမှအကြားအမြင်ချိတ်ဆက်ကူညီပေးရန်သယံဇာတအဖြစ်နေရာမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
သငျသညျဆိုသညျကားစေခြင်းငှါ, Spiritum'' s ကိုကြမ္မာ Pre-ပညတ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ, Eso.tv, 14 နိုင်ငံများတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်ရှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်စောင့်ကြည့်နေကြသည်အဘိဥာဏ်တီဗီအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ရလဒ်အဖြစ်, သင်သည်သင်၏ဖတ်ကနေစစ်မှန်, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် Insight ၏အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
အထောက်အထားလိုအပ်ပါသလား? အကြားအမြင်သူတို့ရဲ့အကွာအဝေးမှာကြည့်လိုက်ပါ။ Spiritum handpicks နှင့်ဂရုတစိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုရှာဖွေသူများအတွက်သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးလမ်းညွှန်မှုနှင့်အကြံဥာဏ်များပေးဖို့တစ်ဦးချင်းစီကဒေသခံနိုင်ငံကနေအကောင်းဆုံးအကြားအမြင် culls ။
တစ်ခုချင်းစီကိုအဘိဥာဏ်အသေးစိတ်ထိုကဲ့သို့သော tarot card ကိုဖတ်, numerology နဲ့နက္ခတ်ဗေဒင်အဖြစ်ရှေးခေတ်အလေ့အထများကျွမ်းကျင်သိရပါတယ်နှင့် / သို့မဟုတ်အလိုလိုသိခွက်နှင့်အရည်အချင်းများနှင့်အတူလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့အသက်တာကိုလမ်းကြောင်းအပေါ်ရှာဖွေနေသူလမ်းပြတာဝန်သိအမွေဆက်ခံသူပင်လက်ဆောင်တွေကိုသုံးနေတယ်သေချာအောင်ကူညီပေးဖို့တသမတ်တည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အတူတူသူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းညွှန်မှု, စွမ်းအင်ဖတ်, အိပ်မက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, Rune ဖတ်ုင်နှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးအပါအဝင်စွမ်းရည်၏ကျယ်ပြန့, ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ထိုသို့ချိတ်ဆက်ဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်! အဆိုပါ site ကိုသှေးဆောငျဖို့ဒီဇိုင်းပေမယ့်တစ်အဘိဥာဏ်ကိုရှေးခယျြသောဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်အခမဲ့စကားပြောရန်, ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကစာဖတ်ခြင်းအဘို့အခရက်ဒစ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့ကို enable ပြုလုပ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောခလုတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလွှမ်းမိုးမပေးပါ။ သင်ဟောပြောပွဲအခမဲ့ option ကိုရွေးချယ်ပါက, သင်လျင်မြန်စွာစဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ဦးကိုရှေးခယျြအဘိဥာဏ်၏အဗီဒီယိုတစ်ကားကိုပြသပေးသောဗီဒီယို box ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ "အခမဲ့ Chat ကိုအခုတော့" ဘားပြသသော profile များကိုမဆိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။
ထိုအခါသင်သည်သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပေါ်မဆိုကိုမီးရှို့မေးမြန်းနေဖြင့်ရွေးချယ်အဘိဥာဏ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသငျနှငျ့အတူဖြစ်လတ်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ပုထဲကချီမြှောက်-ho ပေးသင့်ဘဝအဖော်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသလော ညာဘက်ထောင့်လှည့်ပတ်သငျသညျစောငျ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုနှင့်သာယာဝပြောသလား? သငျသညျမှချစ်လှစွာသောတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်ရာဌာန၌အမှန်ပင်ဖြစ်သနည်း သငျသညျနောက်ဆုံးညဥ့်ခဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်သင်သည်တာရှည်င်း၏လမ်းပေါ်မှာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောင့်တစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာဆိုလိုပါသလား?
Spiritum အကြားအမြင်ရသင်နှင့်သင်ကပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့နေအသက်အဘို့အကွံဉာဏျနှငျ့လမျးညှနျ personalize ။ အဆိုပါအကြားအမြင် '' profile များကိုထုတ်စစ်ဆေးနေခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ရှင်းလင်းစွာသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်သောသူမြားကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အများဆုံးအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်စေနိုင်သည်။ တလျှောက်သင်ကူညီပဒေသာရှိပါတယ်; profile များကိုပြည့်စုံဖြစ်ကြပြီးစတိုင်, ပြောပြီဘာသာစကားများ, စျေးနှုန်း, သက်သေခံချက်ပင်တိုတောင်းသောဇီဝဖတ်နေကိရိယာများ, ကျွမ်းကျင်မှု, စွမ်းရည်, တခုအဖြစ်။ Plus အားတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ဆုကြေးအဖြစ်, သငျသညျအဆင်သင့်ကိုသင်စဉ်းစားနေတဲ့အဘိဥာဏ်အားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်နှင့်၎င်းတို့၏လက်ရှိ ratings ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်မည်မျှအခြားသူများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကို site ကိုအမျှ Spiritum ၎င်း၏တိုးတက်မှုနှုန်း mode မှာတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဤနေရာတွင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးကြောင်းဘယ်သူမျှမ filtering ကိုဖန်သားပြင်နှင့်အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်; အာရုံဟာအကြားအမြင်အပေါ်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးတွင် "အကူအညီ" အောက်မှာဝှက်ထားသောမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်း, ရောက်ရန်အနည်းငယ် Navigator ကြာပါသည်။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရပ်ရွာပျံဝဲဆက်လက်အဖြစ်ပိုပြီး features တွေနဲ့ပိုမိုလွယ်ကူ Navigator ကဆက်ပြောသည်မည်ဖြစ်ကြောင်းသံသယရှိကြသည်။
တိုင်တဲ့အကြီးအရာများစွာကိုရှိပါတယ် Spiritum ညာဘက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထို site အသစ်ဖြစ်ကြလျှင်, သင်အခမဲ့ 10 မိနစ်မှတက်အတွက် "အခမဲ့ Chat ကိုများအတွက်လက်ရှိရရှိနိုင်" အဖြစ်မှတ်သားသောသူတစ်ဦးအဘိဥာဏ်နှင့်အတူ chat လို့ရပါတယ်။ ဒါကအခမဲ့ချက်တင်အားရစရာဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်သည် ဖြစ်. , အဘယ်သူမျှမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Spiritum ရဲ့န်ဆောင်မှု၏အားသာချက်ယူရန်လိုအပ်ပေသည်။
Spiritum နိဒါန်းကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူထုတ်ပေးလျက်ရှိသည် ... သူကသူတို့ကိုအပြစ်တင်နိုင်သလဲ သင်သည်သင်၏အဘိဥာဏ်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အခွအေနေနားလည်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျေနပ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကခရက်ဒစ်ယ်ယူနိုင်ပါသည်ဒါဟာရိုးရှင်းစွာထက်အများကြီးပိုကောင်း get "အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ", သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပုဂ္ဂလိက Two-လမ်းကဗီဒီယိုချတ်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံသို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ရေးသို့မဟုတ်ဖုန်းမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ပါဘူး ... သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု။ သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်း, 99 မှာစတင်တစ်ခုချင်းစီအဘိဥာဏ်အစုံတစ်မိနစ်¢နှင့်ထိထိရောက်ရောက်မကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်အပျေါမှာအခြေခံပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စာဖတ်၏အရှည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သငျသညျအထိင်; ထိုလမ်းသင်သည်သင်၏စာဖတ်ခြင်းဆိုအံ့သြဖွယ်မရှိဘဲကုန်ကျမည်အဘယ်အရာကို up-ရှေ့ကိုသိပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Eos.tv ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကနေမျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်အဖြစ်, Spiritum စိတ်ကျေနပ်မှုဖြည့်စွက်ရန်ကျူးလွန်နေသည်။ သင်သည်သင်၏စာဖတ်ခြင်းနှင့်အတူလုံးဝမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်, သင်သည်သူတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မဆိုအဘိဥာဏ်ကနေအခမဲ့အဘို့အခြားစာဖတ်ခြင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အောက်ခြေလိုင်း: Spiritum ဒဏ်ငွေတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ယနေ့ operating အဘယ်သူမျှမကအခြားအဘိဥာဏ်ကွန်ယက်ကိုနိုင်ငံပေါင်းများစွာသောလူအတွက်အကောင်းဆုံးအဘိဥာဏ်စိတ်ကနေအရမ်း Multi-lingual ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ သငျသညျအခမဲ့မစွန့်စားမှုနိဒါန်းချက်တင်ထဲမှာ add လိုက်တဲ့အခါအဲဒီပါရမီရှင်အကြားအမြင်ထွက်စစ်ဆေးနေအတွက်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။ ထိုအဖြစ်ကောင်း, ရရှိတစ်ခုလုံးအသစ်သို့မထွန်းလင်းဘဲနေကြအနာဂတ်။